Ahoana no handoavana ny SWIFT amin'ny banky iraisam-pirenena?
Ahoana ny fandoavam-bola amin'ny tranokala iraisam-pirenen'ny SWIFT?
Avy amin'ny HGH Thailand Oktobra 08, 2017
Inona ny fandoavam-bola haingana? Fahamendrehana, haingam-pandeha ary fampiasana fiarovana
Ny fandoavam-bola SWIFT dia fifanakalozam-bola iraisam-pirenana eo amin'ny banky tsirairay sy ny orinasam-panjakana amin'ny alàlan'ny tambajotra SWIFT International.
Ny mpikambana ao amin'ny tambajotra amin'izao fotoana izao dia mihoatra noho ny 10 arivo orinasa ara-bola ao amin'ny firenena 210. Izany dia manome anao ny fahafahana handefa haingana ny fandoavam-bola iraisam-pirenena amin'ny vola samihafa any amin'ny firenena mandroso indrindra.
Ahoana no fomba handefasana vola amin'ny alalan'ny rafitra SWIFT amin'ny aterineto?
Banky maro no manome ny fahafahana mandefa transfusion SWIFT iraisam-pirenena amin'ny aterineto amin'ny kaonty Bankinao raha tsy miala ao an-trano.
Raha mandefa vola any amin'ny firenena hafa ianao, midira ny kaontinao Banky (ny "Internet banky", "mpanjifa an-tserasera") ho an'ny sokajy iraisam-pirenena, ary mameno ny fampahalalana ilaina momba ilay mpandray anao, dia ho mora ny mandefa vola any ivelany ny fandanian'ilay mpandray.
Raha sendra misy fanontaniana dia azonao atao ny miantso ny Bankinao ary mahazo toro-hevitra matihanina.
Ahoana ny handefasana vola mivantana avy any amin'ny Banky?
Ny Banky any amin'ny firenenao dia mamela ny handefasana SWIFT. Andao hitsidika ny Banky ary lazao ny fikasanao hanao raharaham-barotra ary manome ny fampahalalana momba ny Banky momba ny mpandray azy mivantana amin'ny mpiasan'ny Banky. Ny mpiasa ao amin'ny banky dia hanao sy hamita ny zavatra rehetra ho anao, ny dingan'ny fampindramana dia tsy haka mihoatra ny 15 minitra.
Inona ny antontan-taratasin'ny mpandoa hetra ho an'ny transakta?
Mba handefasana vola any ivelany dia mila mahafantatra ny antsipirian'ny SWIFT ny mpividy na ny olon-tsotra, izay handefasana ny famindrana.
Ny antsipiriany dia:
- ny anaran'ilay Banky nahazo tombontsoa (ohatra BANGKOK BANK PUBLIC CO..LTD)
- fehezanteny ao amin'ny rafitra SWIFT (ohatra BKKBTHBK )
- ny kaontin'ny kaonty
- anarana sy ny anaran'ny mpandray
Ny SWIFT dia mety amin'ny fandefasana fandefasana amin'ireto tranga manaraka ireto:
- Ny fandefasana vola be dia be any ivelany amin'ny fihenanam-bidy ny komisiona.
- Mividy entana any ivelany.
- Fanomezana tolotra orinasa vahiny.
- Ny famindrana vola be ho an'ny olona amin'ny tanjona hafa.
Na izany aza, tokony voamarika fa ny asa rehetra atao ao amin'ny rafitra SWIFT dia tena azo antoka tanteraka.
Ny rehetra, anisan'izany ny fitantanam-bola, ny andraikitra amin'izany, dia raisina amin'ny rafitra. Ny fampifangaroana tranga ara-logika sy ara-batana dia tsy mamela ny fiovana amin'ny fifindrana, ankoatra izay, ny firaketana manokana dia mahatonga ny tsy hanova ny hafatra mandritra ny fampitana azy amin'ny SWIFT.
Ankoatra ny mpanjifa sy ny mpandray azy dia tsy misy afaka mamaky ny ao anatiny.
Ny haingan 'ny fandefasana SWIFT mifindra any ivelany?
Amin'ny ankapobeny ny vola dia tonga amin'ny mpandray ny ora ao anatin'ny 24 (andro fiasana). Ny fe-potoana farafaharatsiny dia haka ny andro 3-5 mba ho ao amin'ny kaonty fandraisana.
Raha te hahazo antsipiriany bebe kokoa momba ny fandoavam-bola haingana amin'ny baikonao ao amin'ny tranokalanay, azafady Mifandraisa aminay
Mariho tsara fa tsy maintsy ankatoavina ireo fanamarihana alohan'ny hamoahana azy ireo
Miverina any amin'ny fomba hahazoana HGH any Thailandy? Fandefasana & fandoavam-bola